Link တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် Semalt SEO အေဂျင်စီနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တည်ဆောက်ခြင်း
Semalt SEO အေဂျင်စီနှင့်ချိတ်ဆက်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တည်ဆောက်ခြင်း
သင့်မှာ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ရှိတယ်၊ ပြီးတော့သင့်ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုရဲ့ရလဒ်တွေကမင်းရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့မကိုက်ညီဘူး။ စိတ်မပူပါနဲ့။
Link တည်ဆောက်ခြင်းသည် SEO မဟာဗျူဟာ၏အဓိကအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောကွန်ယက်တစ်ခုကိုဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဒိုမိန်းတွင်ရည်ညွှန်းကြောင်းနှင့်ဂူဂဲလ်အား SERP ၏ထိပ်ဆုံးတွင်ရောက်နေရန်ပြသသည်။ ဒါ့အပြင်သင့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်အပေါ်အလုပ်လုပ်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ မှတ်မိလောက်သောအမှတ်တံဆိပ်သည်မြင့်မားသောစျေးနှုန်းဖြင့်ကုန်သည်များကိုရောင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဈေးကွက်ခေါင်းဆောင်များသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွင်အကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသောကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်ကိုလည်းလူသိများသည်။
ဤဆောင်းပါး၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဆီလီကွန်အေဂျင်စီ သည်သင့်အား link များဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အမှတ်တံဆိပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုစီစဉ်ရန်၊ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတတ်နိုင်သမျှပွင့်လင်းမြင်သာစေရန်နှင့်သင်၏ဘတ်ဂျက်နှင့်အညီပြောင်းလဲရန်ကူညီနိုင်သည်။
Link Building: ဒီမဟာဗျူဟာကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲလေ့လာပါ။
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရဲ့အင်အားကိုသင်သိခဲ့ပါသလား။ ခွဲခြားအလုပ်လင့်များကိုပြောရန်ရှိသည်သောအရာကိုအပေါ်အခြေခံသည်? ၎င်းမှတစ်ဆင့် bot သည်အကြောင်းအရာများအားအညွှန်းနှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်နှင့်စာမျက်နှာများအကြားရှိဆက်သွယ်မှုကိုသိရှိရန်ရှာဖွေခြင်းဖြစ်သည်။
ဟုတ်ကဲ့၊ reactive design ရှိသော ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုဖန်တီးခြင်း၊ စာမျက်နှာများ၏အမြန်နှုန်းကိုမြှင့်တင်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးခြင်းသည်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုများဖြစ်သည်။ သင်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်အကောင်းဆုံးရလဒ်များရရှိရန်မလုံလောက်ပါ။ အချိတ်အဆက်များတည်ဆောက်ခြင်းကိုလေ့လာပြီးသင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်အစွမ်းထက်သောကွန်ယက်များဖန်တီးရန်အချိန်တန်ပြီ။
ချိတ်ဆက်တည်ဆောက်ခြင်းဆိုသည်မှာရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များပေါ်တွင်သင်၏အခွင့်အာဏာကိုပိုမိုအားကောင်းလာစေရန်နှင့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာတစ်ခုသို့ချိတ်ဆက်မှုကွန်ယက်တစ်ခုဖန်တီးရန်ရည်ရွယ်သော SEO နည်းဗျူဟာများဖြစ်သည်။
ဒီ link တွေက external ဒါမှမဟုတ် internal ဖြစ်နိုင်တယ်။ လင့်ခ်များဖန်တီးရာတွင်မူများသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြင်ပလင့်များကိုဆိုလိုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအခြားဆိုဒ်များမှရရှိသောလင့်များ (backlinks သို့မဟုတ် inbound links) ဟုခေါ်သည်။
ဤအချိတ်အဆက်များ၏အခန်းကဏ္ role သည် Google ကိုစျေးကွက်ရှိလူကြိုက်များမှုနှင့်အခွင့်အာဏာကိုပြသရန်ဖြစ်သည်။ ရှာဖွေသူသည်ဆိုဒ်ကိုညွှန်ပြသောလင့်ခ်များကိုရှာဖွေပြီး၎င်းသည်လုံလောက်စွာကိုးကားထားခြင်းရှိ၊ မရှိရည်ညွှန်းကောင်းများရှိမရှိသိရန်ရှာသည်။
လင့်ခ်များသည်ဝက်ဘ်တည်ရှိနေသရွေ့အရေးကြီးသည်။ World Wide Web ကို "ဝက်ဘ်" အဖြစ်ဖွဲ့စည်းထားသောအပြန်အလှန်ဆက်နွယ်သောစာရွက်စာတမ်းများအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
ချိတ်ဆက်မှုများသည်ဆက်သွယ်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်၊ အသုံးပြုသူများအကြားဆက်သွယ်မှုကိုခွင့်ပြုသည် စာမျက်နှာများ၊ ဆိုဒ်များ၊ ရုပ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယိုများနှင့်ဖိုင်များ။
အစပိုင်းတွင်ဆိုဒ်အနည်းငယ်သာရှိနေစဉ်အားလုံးသည်ကောင်းစွာဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်သုံးစွဲသူများ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ အကြောင်းအရာများနှင့်ရှာဖွေမှုများသည်သိသိသာသာတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ရလဒ်အနေနှင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရှာဖွေမှုရလဒ်များရရှိစေရန်သူတို့၏ algorithms ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရသည်။
ပထမ ဦး စွာ၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ချက်ကိုချန်ထားခဲ့ပြီးဝက်ဘ်စာမျက်နှာများအတွက်လိုက်လံရှာဖွေခြင်းကိုစတင်ခဲ့သည်။ ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများအားလုံးကိုစာရင်းပြုစုရန်နှင့်အသုံးပြုသူများကိုစနစ်တကျစီစဉ်ထားသောနည်းလမ်းများဖြင့်အသုံးပြုရန်ရည်မှန်းချက်ဖြင့်၎င်း၏ရည်ညွှန်းချက်ကိုရည်ညွှန်းသည်။
ဒီတာဝန်ကိုကျေပွန်ရန်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည်အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ထားသောဖွဲ့စည်းပုံကိုအသုံးပြုသည်။ ဝဘ်။ ဒီနေ့အထိအလုပ်လုပ်တယ်၊ အကြောင်းအရာအသစ်များသို့မဟုတ်အသစ်ပြောင်းခြင်းများအတွက်ဆိုဒ်များကိုဖြတ်သန်းသွားသောရှာဖွေရေးအင်ဂျင် bot များ၏ဝက်ဘ်လမ်းကြောင်းများကိုပြသည်။
ထို အချိန်မှစ၍ အက္ခရာစဉ်အရဆိုဒ်များကိုစာရင်းပြုစုရန်မလိုအပ်တော့ပါ။ အမိန့်။ စာမျက်နှာများကဘာကိုကမ်းလှမ်းသည်နှင့်သူတို့အသုံးပြုသူများရှာဖွေလိုသောသတင်းအချက်အလက်ရှိမရှိဆန်းစစ်ရန်လိုအပ်သည်။
ရည်ရွယ်ချက်မှာဆိုက်ပေါ်တွင်အခြေခံထားသည့် site ၏ဆက်စပ်မှုကိုတိုင်းတာရန်ဖြစ်သည်။ အခြားဆိုဒ်များမှရရှိသောလင့်ခ်အရေအတွက်။ ယုတ္တိဗေဒသည်ပညာရေးနယ်ပယ်တွင်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ စာရေးသူက ပို၍ ကိုးကားလေလေ၊ သူသို့မဟုတ်သူမ၏အသိပညာနယ်ပယ်တွင်သူ၌သူမအခွင့်အာဏာပိုရှိလေလေဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် site တစ်ခုချိတ်ဆက်လေလေ၊ ၎င်းသည်၎င်း၏ကျွမ်းကျင်မှုနယ်ပယ်၌ ပို၍ သက်ဆိုင်လေလေဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်လင့်ခ်များသည် website ၏အခွင့်အာဏာကိုပြသသည်။ ဤသည်မှာလင့်ခ်များသည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များနှင့် SEO ကျွမ်းကျင်သူများအတွက်အရေးပါလာသည်။
ဂူဂဲလ် algorithm သည်အချက်အလက်များအမြောက်အမြားကိုအဆင့်သတ်မှတ်ရန်အသုံးပြုသည်။ စာမျက်နှာနှင့်ထိုအချက်များသည်ဂူးဂဲလ်၏ချိတ်ဆက်မှုအကဲဖြတ်ချက်များသို့သွားသည်။
၎င်းသည် Google မှပထမဆုံးသတ်မှတ်ခဲ့သည် ၎င်းသည် Page Ranking ၏အခြေခံဖြစ်သည်။ site တစ်ခုချိတ်ဆက်လေလေ၊ သက်ဆိုင်လေလေဖြစ်သည်။ စာမျက်နှာတစ်ခုသို့ချိတ်ဆက်ထားသောနံပါတ်များသည်ဝက်ဘ်ပေါ်တွင်လူကြိုက်များမှုကိုပြသခဲ့သည်။
ဒီဂရီသည်ဂူဂဲလ်အချိတ်အဆက်များ၏အကဲဖြတ်မှုတွင်အရေးအကြီးဆုံးအချက်တစ်ချက်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ တစ်ယောက်တည်းမလာဘူး၊ သက်ဆိုင်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုမရှိသောဆိုဒ်များမှလင့်ခ်များစွာကိုရယူရန်သည်အသုံးမကျပါ။ အရေအတွက်ကိုအောက်တွင်တွေ့မြင်ရမည့်အချက်များနှင့်ပေါင်းစပ်ရန်လိုအပ်သည်။
သင်ထင်သည်ထက်ပိုထိုက်သည် - လူတစ်ယောက်။ မင်းဟာတော်တယ်လို့မင်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာပြောခဲ့ဖူးလား၊ သင့်အကြောင်းကောင်းကောင်းပြောဆိုနိုင်လေ၊ သင်၏အုပ်စုတွင်သင်ပိုမိုအသိအမှတ်ပြုလေလေဖြစ်သည်။
၎င်းသည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုချင်းစီကိုဂူးဂဲလ်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အတွက်၊ ကွန်ယက်သည်မတူညီသောဒိုမိန်းများစွာမှလင့်ခ်များကိုလက်ခံရရှိသောအခါပိုမိုသောအခွင့်အာဏာကိုပြသသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ချိတ်ဆက်မှုပရိုဖိုင်း၏မတူကွဲပြားမှုများကိုအကဲဖြတ်ခြင်းတွင်လည်းထည့်သွင်းထားသည်။
ဂူးဂဲလ်သည်ကြည့်ရှုရန်လင့်ခ်ပတ်လည်ရှိအခြေအနေကိုနားလည်နိုင်သည်။ တကယ်သက်ဆိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ
လင့်ခ်၏နှိပ်နိုင်သောစာသားဖြစ်သောကျောက်ချစာသားသည်လင့်ခ်စာမျက်နှာအကြောင်းကိုများစွာပြောထားသည်။ များသောအားဖြင့်၎င်းသည်သော့ချက်စာလုံး (သို့) အချိတ်အဆက်ပေါ်တွင်နှိပ်သောအခါအသုံးပြုသူသည်မည်သည့်အရာကိုတွေ့ရမည်ကိုဖော်ပြသည်။ ထို့ကြောင့်ဂူဂဲလ်သည်ဤအချက်ကိုစာမျက်နှာများကိုရည်ညွှန်းရန်အသုံးပြုသည်။
မှီခိုမှုဖန်တီးမှုတွင်သင်သည်ပြည်တွင်းရေးနှင့်ပြင်ပမှီခိုမှုများနှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွင်မည်သည့်အလေးချိန်သည်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်ကိုသိရန်အရေးကြီးသည်။
နားလည်ရန်စဉ်းစားပါ၊ ဂူးဂဲလ်သည်သင့်ဆိုဒ်နှင့် ပတ်သက်၍ သူ့အကြောင်းပြောဆိုရာကိုဂူးဂဲလ်ပိုယုံကြည်ပါသလား ( ပြည်တွင်းချိတ်ဆက်မှု) သို့မဟုတ်သင်၏ဆိုဒ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအခြားဆိုဒ်များကဘာလဲ (ပြင်ပလင့်များ)?
သင်ထည့်သွင်းထားသောလင့်ခ်များ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သည် backlink များကဲ့သို့မလေးသော်လည်း၊ သင်၏စာမျက်နှာများ၏အဆင့်ဆင့်ကိုဂူဂယ်လ်သို့ပြသရန်ကူညီသည်။
ဂူးဂဲလ်ကသင်လူကြိုက်များ။ စိတ်ချရသောလင့်များသို့လင့်ခ်များကိုပေးသည်၊ နှင့်ခိုင်လုံသောဆိုဒ်များ။
SEO ၏အစောပိုင်းကာလများတွင် backlink များသည်အနက်ရောင် ဦး ထုပ်၏အဓိကကိရိယာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သုတေသီ။
ဝက်ဘ်ဆိုက်အတော်များများသည် link farms သို့မဟုတ် link များဝယ်ရန်နှင့်ရောင်းရန်ပရိုဂရမ်များကိုသုံးသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်ချက်ချင်းအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများရရှိခဲ့သည်။
ရလဒ်အနေဖြင့် Google သည်ဤအလေ့အကျင့်ကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်အပြစ်ပေးရန်၎င်း၏ algorithm ကိုအားဖြည့်ခဲ့သည်။ ၎င်းကိုအတည်ပြုရန်အရင်းအမြစ်များအနက်မှတစ်ခုသည်အချိတ်အဆက်များ၏အရှိန်ကိုစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။
အချိန်တိုအတွင်းအချိတ်အဆက်များစွာရရှိခြင်းသည်များသောအားဖြင့် black hat system ကိုသတ်မှတ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သဘာဝဆက်သွယ်မှုပရိုဖိုင်းသည်တိုးတက်သောတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
စာမျက်နှာတစ်ခုပေါ်ရှိ link များကိုဆန်းစစ်ရာ၌ဂူဂယ်လ်အကဲဖြတ်သောနောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်မှာ nofollow attribute ဖြစ်သည်။ ဒီ attribute ကို link ၏ကုဒ်ထဲထည့်သောအခါ၎င်းသည်ချိတ်ဆက်ထားသောစာမျက်နှာ၏အဆင့်အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်မသင့်ကြောင်း bot သိသည်။
အခြား စကားလုံး nofollow လင့်များ link ကိုဖျော်ရည်ထုတ်လွှင့်ကြဘူး။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တည်ဆောက်ခြင်း - စျေးကွက်၏လိုအပ်ချက်များ၊ ပြိုင်ဘက်များနှင့်ပစ်မှတ်ထားတဲ့ပရိသတ်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
စာပေရှာဖွေမှုကာလအတွင်းလေ့လာသုံးသပ်သူများကသတင်းအချက်အလက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနည်းလမ်း (၄) ခုကိုအသုံးပြုကြသည်။
- ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှု။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆန်းစစ်လေ့လာမှု ကုန်ကြမ်းထုတ်လုပ်သူများ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီများ၊ ဖြန့်ဖြူးသူများနှင့်ရောင်းချသူများသာမကစျေးကွက်တွင်ပါ ၀ င်သူများဖြစ်သည်။
- နှိုင်းယှဉ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လုပ်ငန်းတူတူညီသောကုမ္ပဏီများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်။ ဥပမာကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုမြှင့်တင်သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီများသို့မဟုတ်အေဂျင်စီများသာဖြစ်သည်။
- ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။ ခေတ်ရေစီးကြောင်းများကိုမီးမောင်းထိုးပြ ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ၀ ိုင်ထုတ်ကုန်များ၏စျေးကွက်အားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တံဆိပ်ဒီဇိုင်းတွင်နောက်ဆုံးပေါ်တိုးတက်မှုများအကြောင်းပြောဆိုကြသည်။
- In -depth analysis ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုမ္ပဏီ၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များအပြင်ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်မှလာသည့်အခွင့်အလမ်းများနှင့်ခြိမ်းခြောက်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်သည်။
လေ့လာမှု၏ရလဒ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တိကျသောစီးပွားရေးနယ်ပယ်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းများနှင့်စျေးကွက်အလားအလာများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည့်စုံသောသတင်းအချက်အလက်များကိုရရှိသည်။ စာရင်းအင်းများသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအားနည်းချက်ကိုမှန်ကန်စွာသတ်မှတ်နိုင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
သင်ရှိသည်လား။ လေ့ကျင့်သင်ကြားခံပြီလော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖန်တီးရန်အဆင့်များကိုစတင်လေ့လာကြပါစို့။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါ၊ အရာရာတိုင်းဟာလွယ်ကူပြီးရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီးမည်သူမဆိုကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်ဟုသင်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ သို့သော်ကောင်းမွန်သောအမှတ်တံဆိပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ကြော်ငြာ၊ ဒီဇိုင်းနှင့်စိတ်ပညာဆိုင်ရာဗဟုသုတနှင့်စျေးကွက်အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုနေရာချရန်အတွေ့အကြုံရှိရန်လိုအပ်သည်။
လက်ရှိစျေးကွက်အခြေအနေအားသုံးသပ်ခြင်း (စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆိုင်ရာသုတေသန) ။
အမှုဆောင်အရာရှိတစ် ဦး အားရှာဖွေခြင်း၊
အကယ်၍ သင့်တွင်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ရှိသော်လည်းလူကြိုက်များမှုနှင့်ဆီလျှော်မှုပျောက်ဆုံး။ ၎င်း၏အနေအထားကိုဆုံးရှုံးသွားလျှင်။ စျေးကွက်နှင့်၎င်း၏စားသုံးသူများအတွက်, သင်သည်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်ပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုအပ်သည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ကအောင်မြင်သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပြောင်းလဲမှုသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ထဲသို့ဘဝအသစ်ကိုအသက်ဝင်စေနိုင်သော်လည်းအသစ်စက်စက်ကိုဖန်တီးခြင်းသည်စျေးကြီးသည်။ ထို့ကြောင့်စပျစ်ပင်မှအရာခပ်သိမ်းကိုချက်ချင်းဖြတ်။ ထပ်မံစတင်ရန်အလျင်စလိုမသွားပါနှင့်။
အဆင့် ၁ - ရည်ရွယ်ချက်များကိုဒီဇိုင်းဆွဲပြီးအမှတ်တံဆိပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်းကိုစီစဉ်ပါ။
စီစဉ်ခြင်း သင်၏စီမံကိန်းကိုအောင်မြင်စွာအကောင်အထည်ဖော်ရန်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့်ကောင်းမွန်စွာစဉ်းစားထားသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမရှိပါကအရာရာကိုမျက်ခြည်မပြတ်ဘဲသင်၏စီမံကိန်းကိုလုပ်ဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
စီမံကိန်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ သင်၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုစုစည်းရန်၊ သတ်မှတ်ရက်များနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များ၏အစီအစဉ်များကိုသတ်မှတ်ရန်၊ ဘတ်ဂျက်တစ်ခုသတ်မှတ်ရန်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်များအောင်မြင်မှုကိုအကဲဖြတ်ရန်နည်းလမ်းများရှိသည်။
ဤအဆင့်တွင်၊ အခြားအမှတ်တံဆိပ်များသို့မဟုတ်ကော်ပိုရိတ်အမှတ်တံဆိပ်များ၏အမှတ်တံဆိပ်၏နေရာနှင့်အမှတ်တံဆိပ်၏လိုချင်သောဝိသေသလက္ခဏာများကိုအမှတ်အသားပြုရန် (ရည်မှန်းချက်သည်အဖွဲ့အစည်း၏တာ ၀ န်နှင့်ကိုက်ညီရမည်) ကိုဆုံးဖြတ်ရန်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောသတ်မှတ်ရန်လိုအပ်သည်။ (အရည်အသွေး၊ ဘ ၀ သံသရာ၊ ယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာအားသာချက်များစသည်တို့) နှင့်တိုင်းတာနိုင်သောအမှတ်တံဆိပ်သတ်မှတ်ချက်များကိုဖော်ထုတ်ရန်၊ ၎င်း၏ထိရောက်မှုကိုနောက်ထပ်အကဲဖြတ်လိမ့်မည်။
၎င်းသည်လည်း ကုမ္ပဏီ၏ရရှိနိုင်သည့်အရင်းအမြစ်များ (ဘဏ္financialာရေး၊ အလုပ်သမား၊ သတင်းအချက်အလက်များစသဖြင့်) ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်၊ စီမံကိန်း၏စည်းကမ်းချက်များကိုရေးဆွဲရန်နှင့် t ကိုညွှန်ပြရန်လိုအပ်သည်။ သူသည်စီမံကိန်းအတွက်ကုမ္ပဏီ၏ဘတ်ဂျက်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ စီမံကိန်းကိုလူအများကစီမံခန့်ခွဲမည်ဆိုပါကစီမံကိန်းအတွက်တာ ၀ န်ရှိသည့်အဖွဲ့ကိုဆုံးဖြတ်ရမည်။
အဆင့် ၂ - လက်ရှိအခြေအနေကိုသုံးသပ်ခြင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း
သင်သတ်မှတ်ပြီးသည်နှင့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအစီအစဉ်၊ လက်ရှိစျေးကွက်အခြေအနေကိုဆန်းစစ်ဖို့လိုတယ်။ ဤအဆင့်ကိုအဆင့်များစွာခွဲခြားနိုင်သည်။
< div> - ပြိုင်ဘက်အားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
< div> 2.1 ။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်း အမှတ်တံဆိပ်လိုအပ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ စျေးနှုန်းနှင့်စျေးကွက်များ (ဒေသဆိုင်ရာ၊ နိုင်ငံအဆင့်သို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာ) ကိုသတ်မှတ်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည်စျေးကွက်တွင်မည်မျှကြာကြာရှိနေမည်နှင့်ရာသီအလိုက်ပုံမှန်ဖြစ်မည်ကိုလည်းညွှန်ပြရန်လိုအပ်သည်။
အကယ်၍ ကုမ္ပဏီတွင်ကြွေးကြော်သံနှင့်လက်ရှိဆက်သွယ်မှုများရှိပါကဆန်းစစ်ပါ ၎င်းသည် (အမှတ်တံဆိပ်အတွက်သင့်တော်မှုရှိမရှိသို့မဟုတ်၎င်းကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်သည်ကိုသေချာအောင်ပြုလုပ်ပါ) ။ နောက်ထပ်အရေးကြီးသည့်အချက်မှာကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည်တစ်နှစ်မှသုံးနှစ်အထိစျေးကွက်ရှာဖွေရေးရည်ရွယ်ချက်များ (စျေးကွက်ဝေစု၊ အရောင်းတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ကုမ္ပဏီ၏ပုံသဏ္ofာန်တိုးတက်အောင်စသည်တို့) ဖြစ်သည်။
စည်းကမ်းအနေနှင့်ဤအချက်အလက်အားလုံးကိုစာချွန်လွှာဖြင့်စနစ်တကျစီစဉ်ထားသည် (စာချွန်လွှာသည်အနာဂတ်စီမံကိန်း၏အဓိကသတ်မှတ်ချက်များကိုသတ်မှတ်ထားသောပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ) အတိုချုပ်ဖြည့်စွက်ခြင်းအားဖြင့်သင်ရရှိနိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပြည့်စုံသောနည်းလမ်းဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်သည်။
၂.၂ ။ နောက်တစ်ဆင့်မှာပြိုင်ဘက်အားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြစ်သည်။ အကြီးမားဆုံးအမှားမှာသင့်တွင်ပြိုင်ဘက်မရှိသူသို့မဟုတ်ပြိုင်ဘက်အနည်းငယ်သာရှိသည်ဟုသင်ထင်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့ကိုသင်ဂရုမစိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ လူတိုင်းတွင်ပြိုင်ဘက်များရှိပြီးနေ့စဉ်ယှဉ်ပြိုင်မှုနှုန်းသည်တိုးနေသည်။ ထို့ကြောင့်ပထမ ဦး စွာပြိုင်ဘက်များ၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်လိုအပ်သည် (စေ့စေ့စပ်စပ်ဆန်းစစ်လေ့လာပါ) ။ သင့်ထက်ဘယ်သူမှပိုကောင်းလိမ့်မည်ဟုမပြောသင့်ပါ။ သတိရပါ၊ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်အဆုံးမရှိဖြစ်ပြီး၊ အရာအားလုံးကိုသိပြီးသားဟုသင်ထင်သောကြောင့်သင့်ကိုလှည့်စားမထားသင့်ပါ။
၂.၃ ။ ပစ်မှတ်ထားသောပရိသတ်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအဆင့်တွင် (စားသုံးသူအကြိုက်များကိုလေ့လာခြင်း) သည်သင်၏ပစ်မှတ်ထားသောပရိသတ် (အသက်၊ လိင်၊ စျေးဝယ်နေရာများစသဖြင့်) ကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြရန်သာမက ၀ ယ်သူ၏လိုချင်မှုနှင့်မည်သည့်သူ၏ပစ္စည်းကိုပါသိရန်လိုအပ်သည်။ လိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးခံရကြသည်မဟုတ်။ ဒီမှာအဓိကပြproblemနာကစားသုံးသူဟာသူလိုချင်တာကိုဘယ်တော့မှအတိအကျမသိဘူးဆိုတာပါ။ ထို့ကြောင့်သင်၏အကြံဥာဏ်အပေါ်သုံးစွဲသူ၏တုံ့ပြန်မှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်သိမ်မွေ့သောစိတ်ပညာရှင်ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။ စားသုံးသူများအနေဖြင့် ၀ ယ်ယူမှုတစ်ခုအား ၀ ယ်ရန်အဘယ်အရာကလှုံ့ဆော်ပေးသည်ကိုနားလည်ရန်လည်းအရေးကြီးသည်။
လေ့လာမှုများအားလုံးကိုနည်းစနစ်များစွာဖြင့်ကွင်းဆင်းသုတေသန (အဓိကဒေတာနည်းလမ်း) နှင့်စာပေသုတေသနတို့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည် (စက္ကန့်သုတေသနဟုခေါ်သည်အလယ်တန်းဒေတာနည်းလမ်း) နည်းစနစ်နှစ်ခုအကြားခြားနားချက်မှာသုတေသနဌာနသည်ယခင်ကစုဆောင်းထားသောနှင့်ရရှိပြီးဖြစ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသည်၊ ကွင်းဆင်းသုတေသနသည်တိကျသောရည်ရွယ်ချက်များကိုခြစ်ရာမှဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသုတေသနသည်အရေအတွက်ရောအရည်အသွေးရောပါသည်။ အရေအတွက်နည်းလမ်းများတိကျသောကိန်းဂဏန်းဒေတာများကို; ဤသည်များသောအားဖြင့်အမျိုးမျိုးသောတွက်ချက်မှုများနှင့်ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုများကိုပြုလုပ်နိုင်သည့်အခြေခံအားဖြင့်စာရင်းအင်းအချက်အလက်များဖြစ်သည်။
သုံးစွဲသူများ၏အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်၊ ထုတ်ကုန်နှင့်ဆက်နွယ်မှု၊ ၀ ယ်ရသည့်အကြောင်းရင်းများနှင့်အခြားများစွာသောအရည်အသွေးများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ဤအချက်အလက်များ၏အခြေခံအားဖြင့်သင်ထုတ်ကုန်ကိုမည်သို့တိုးတက်အောင်လုပ်ရမည်၊ ကြော်ငြာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတွင်မည်သည့်အရာနှင့်အာရုံစူးစိုက်သင့်သည်၊ ၀ ယ်သူပိုမိုဆွဲဆောင်ရန်ကုန်ပစ္စည်းတွင်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်စသည်တို့ကိုလေ့လာနိုင်သည်။
စာပေသုတေသနလုပ်ငန်းသည်ကွင်းဆင်းသုတေသနထက်အားသာချက်များစွာရှိသည်။ အကောင်အထည်ဖော်မှုမြန်နှုန်း၊ သတင်းအရင်းအမြစ်အမြောက်အများရရှိနိုင်မှုနှင့်ငွေကြေးနှင့်အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်များကိုလျှော့ချခြင်း။ သို့သော်သတင်းအချက်အလက်သည်လတ်ဆတ်ပြီးနောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်အမြဲတမ်းလိုအပ်သည်။
"ဘီးကိုပြန်လည်တီထွင်ရန်" မလိုအပ်ပါ။ နောက်တစ်ကြိမ်၊ အထူးသဖြင့်သင်နှင့်တူသောပြissuesနာများနှင့်ပြproblemsနာများပေါ်ပေါက်ပြီးဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းမှာရရှိနိုင်ပြီးသားစုဆောင်းထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ထိုအလုပ်ကိုသင်မသေချာလျှင် Semalt ပညာရှင်များကိုဆက်သွယ်ပါ။
Semalt ၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကျွမ်းကျင်သူများသည်သင့်အတွက်လိုအပ်သောသုတေသနအားလုံးကိုအရည်အသွေးပြည့်မှီစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်နားလည်နိုင်သောပုံစံဖြင့်တင်ပြမည်ဖြစ်ပြီးအရာအားလုံးကို“ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စင်များပေါ်တွင်တင်ထားရမည်” ဖြစ်သည်။ div>
တံဆိပ်၏စွမ်းဆောင်ရည်၊ စျေးကွက်အခြေအနေ၊ ယှဉ်ပြိုင်မှုပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သုံးစွဲသူများအားစဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့်သာလျှင်သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တည်ရှိမှုကိုအာမခံနိုင်သည်။